'भाइटीकाको चलन आउनुअघि दाजुभार्इ र दिदी बहिनीबीच यौन सम्बन्ध हुन्थ्यो' - NepalPana
नेपाल पाना ३० आश्विन २०७४, सोमबार ०९:२९ मा प्रकाशित
वरिष्ठ संस्कृतिविद् तथा इतिहासकार डा जगमान गुरुङ संस्कृत भाषामा गहिरो दख्खल राख्ने ब्यक्तित्व हुनुहुन्छ । नेपाली समाजका चालचलनवारे गहिरो अध्ययन गर्नुभएका गुरुङसँग तिहार संस्कृतिका बारे बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
तिहार भनेको चाहिँ सु–सभ्य, सु–संस्कृत मानव जीवनको द्योतक हो । त्यसबेला आफ्नै परिवारका सदस्यबीच यौन सम्बन्धको चलन थियो । त्यस्तो चलन रोक्दै दाजुभाई र दिदीबहिनीबीच यौन सम्बन्ध हुनुहुँदैन भन्ने चलन आयो । एकले अर्कोलाई पूजा गर्ने सम्बन्धको रुपमा या भनौं सुसंस्कृत र सभ्य समाज निर्माण गर्न यसको विकास भएको देखिन्छ ।
नेपालकै उत्तरी भेगमा पाँच पत्नी बिवाह गर्ने चलन अझै यदाकदा छ । त्यस्तै गुरुङ र तामाङमा पनि कुटुम्बेली चल्छ । मगरमा पनि यो चलन थियो । तर अहिले पाल्पा, स्याङजा, तनहुँका मगरहरुले मामाकी छोरी विवाह गर्ने फुपूकी छोरी नगर्ने भन्ने चलन ल्याएका छन् । ठकुरीमा पनि यस्तै चलन छ । बिस १९९६ सालमा रंगनाथ पौडेल प्रधानमन्त्री हुँदा पश्चिम सतथौलाका जैसी बाहुनहरुलाई एउटा रुक्का पठाएर तिमीहरुले भाञ्जी बिवाह नगर्नु भनेका छन् । रुक्का भनेको अर्डर पेपर हो । मनुस्मृतिमा लेखिएको छ– ‘दक्षिणे मातुली कम्पा, उत्तरे माषेमक्षण ।’ यो भनेको भारत तिरका बाहुनले मामाका छोरी बिहे गर्छन् र उत्तरकाले मासु खान्छन् । मतलव ती दुबै नराम्रा हुन् भनिएको छ । मुसलमानले आफ्नै दाइभाईका छोरी विवाह गर्छन् । कोख र योनी मात्र बार्ने चलन तिनीहरुको छ । यम र यमीको कथाबाट चाहिँ आर्यहरु परिष्कृत हुँदै भाइ तिहारका रुपमा सभ्य संस्कृति अघि बढाएको देखिन्छ । त्यसैले तिहार नैतिकताको धरोहर हो । यसले नीति नियम कायम गरायो । समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनायो । त्यसैले सभ्य जीवन, सुसंस्कृत र आर्दश जीवन जीउने शन्देश यम द्वितीयाले दिएको छ ।
अहिले त तिहार नभनी दीपावली भन्ने गरिन्छ नि, यो ठीक होइन ?
थियो नि, किन नहुनु । तर, अहिले प्रयोग भएका रंग भने पछि आएका हुन् । त्यसबेला पहेंलो रंगको लागि बेसारको प्रयोग गरिन्थ्यो । हरियो रंगका लागि दुवोबाट लेप बनाइन्थ्यो । त्यस्तै अन्य रंगको लागि काफल, र अन्य फूलहरु प्रयोग गरिन्थ्यो । यसरी आफ्नै गाउँघरका कुरा प्रयोग गरेर सप्तरंगी टीका लगाइन्थ्यो । –चक्रपथबाट साभार
वाम गठबन्धनबारे झलनाथ खनालको नयाँ खुलासा, एमाले र माओवादीबीच यतिसम्मको विवाद नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिचको पार्टी एकता प्रक्रियालाई सबैले चुनौतिपूर्ण मानेका छन् । […]
गुण्डागर्दी, ठगीको धन्दा गर्नेहरु अब बाँकी रहदैनन्ः एआईजी चन्द (अन्तर्वार्ता) महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) रानीपोखरीको जिम्मेवारी पाएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) जयबहादुर चन्दले शुक्रबार पदभार […]
चुनावमा एमालेसँगको सहकार्य, आन्दोलन र सरकारमा सहभागिताबारे महन्थ ठाकुरको सनसनीपूर्ण खुलाशा (अन्तर्वार्ता) शनीबार दिउँसो १ बजे बबरमहलस्थित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपालको कार्यालयमा कान्तिपुर टिम पुग्दा […]
कसले गर्यो लोकमानको हत्या गर्ने षड्यन्त्र ? यसरी भयो सनसनीपूर्ण खुलासा (अन्तर्वार्ता) तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कोपभाजनमा परेर पदमुक्त गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालिक प्रमुख […]
ओलीजीको हठले देशको समस्या समाधान हुदैन : राजेन्द्र महतो अहिले देश राष्ट्रिय जनता पार्टीको मागमा अड्किए जस्तै भएको छ । विशेषगरी राजपाको मागका […]
स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन मुल समितिको संयोजक रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले हामी चुनाव हार्यौ : रमेश लेखक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । […]